गटटटट ताली बज्दै थियो, कृषि क्षेत्रमा ठूला विद्वान मानिएका व्यक्तिहरु पनसमा बत्ती बाली समारोह उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि क्रमैसँग उद्घोषकले विद्वान व्यक्तिहरुलाई आफ्ना दुई शब्द चाँडो चाँडो राखिदिन अनुरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।
यसै समारोहको एक कुनामा बसी म पनि कार्यक्रम अवलोकन गरिरहेका थिए । विद्वान व्यक्तिहरुको दुई शब्द सुन्दै गर्दा ममा भित्रभित्रै वर्षात्को समयमा दुई बालद ठोक्किएर अनि गर्जिएर झरेको पानी जस्तै मेरो मनमा एकातिर अट्टहासको हाँसो र अर्कोतिर दुःख ठोक्किएर आँखाबाट आँसु बनी तप्पतप्प झर्न पुगे ।
एक महान व्यक्तित्व भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘कृषिमा क्रान्ति गरौं, कृषिमा आत्मनिर्भर बनौं । कृषिबाटै देश विकास गरौं । सक्षम बनौं ।’
यो सुनिँरहँदा मलाई लाग्यो, यो देशको सक्षम, ठूला नागरिक त त्यो रहेछ, जसले छोराछोरीलाई डाक्टर पढाउन सक्षम रहेछ ।
यसैगरी अर्का विद्वान व्यक्तिव आफ्ना दुई शब्द राख्न अघि आउनुभयो र भन्न थाल्नुभयो, ‘हो, कृषिमै केही गरौं । नेपालमा उब्जाएका कृषि सामग्री विदेशमा बिक्री गर्न सक्ने योजना बनाऔं । अनि धेरै आम्दानी गर्न सफल भई आफ्नै देशमा बसी कमाएको धनले छोराछोरी, भाइबहिनीलाई डाक्टर, इन्जिनियर पढाउन सफल होऔं ।’
उहाँले अघिल्लो व्यक्तिको भनाई ‘डाक्टर बनाऔं भन्ने वाक्यमा इन्जिनियर’ पनि थपेर जानुभयो ।
यी दुई व्यक्तिको दुई शब्द सुनिसक्दा नसक्दै मेरो कान रातो रातो भएर १०० डिग्रीको तापमानमा पुग्यो । भुङ्ग्रो ज्वरो आएजस्तो । अनि आँखाबाट आँसुको ढिका गलासम्म आइपुग्दै थियो । यतिखेरसम्म मेरो कामन डम्मर भएर म कोही बोलेको सुन्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको रहेछु । तर पनि मनमा झिनो आशा लिएर बसिरहेँ । कोही त बोल्छन् कि जुन कुरा मैले सुन्न चाहिरेकी छु ।
यत्तिकैमा अर्का व्यक्ति आउनुभयो अनि सुरु गर्नुभयो आफ्ना दुई शब्द । ‘आदरणीय कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु, हामी कृषिप्रधान देशका नागरिक हौं । हामी हाम्रो देशमा तराईदेखि पहाडसम्म विभिन्न उब्जनी गर्न सक्छौं र आफ्नै देशमा बसी, चाहे अनुरुपको आम्दानी गरी छोराछोरीको इच्छाअनुसार डाक्टर, इन्जिनियर पढ्न बाहिर पठाउन सक्छौं ।’
यी तेस्रा व्यीक्तको दुई शब्दले मेरो छातीलाई पाँच दश किलोको ढुंगाले थिचेझैं थिच्न थाल्यो अनि मेरो शरीर च्यापिएर उठ्नै नसक्ने भएछ र त्यहाँबाट उठ्ने कोशिस गर्दागर्दै भित्ता समात्न पुगेछु । अनि भुईंमा लड्न पुगेछु ।
सबैको नजर म भएतिर खिचिएछ । अनि म बिस्तारै उठेर फेरि कुर्सीमा बसेर अरुको अगाडि आफू ठिक भएजस्तो गरी बाहिरी बनावटी हाँसो हाँस्दै, कुर्चीमा बसी, कार्यक्रम अवलोकन गरिरहेँ ।
फेरि गटटट ताली बज्यो । अब कार्यक्रमको समापनमा सभापति महोदय बोल्न आउँदै हुनुहुन्थ्यो । सोचेँ– यी व्यक्तिले पो केही बोल्छन् कि कृषि विज्ञानबारे ।
यस्तै सोचेँ र सुन्न थालेँ । उनी बोल्न थाले, ‘धन्यवाद उद्घोषकज्यू । म धेरै बोलेर धेरै समय लिन चाहन्नँ । छोटो मिठो बोलेर कार्यक्रम टुंग्याउन चाहन्छु । हाम्रा बाउबाजे पनि कृषिमै आत्मनिर्भर थिए र हामी पनि बन्न सक्छौं । खाडी मुलुकमा गएर पसिना बगाउनको साटो नेपालमा नै कृषिमा केही गरौं ।’
यति सुनिरहँदा मेरो मनमा फेरि आशा जाग्यो । ल, यिनले चाहिँ केही कृषि विज्ञानका हितमा बोल्लान जस्तै छ है । यस्तै सोच्दै ध्यान दिएर सुन्न थालेँ । उनी भन्दै थिए, ‘हो, नेपालमा नै केही गरौं । कृषिलाई व्यावसायीकरण गरौं । कृषि बजार व्यवस्थापन गर्न सबैले टेवा पु¥याऔं । देशलाई विकसित बनाऔं ।’
उनले यत्तिकैमा कुरा टुङ्ग्याए । मेरो झिनो आशाको त्यान्द्रो पनि त्यहीँनेर छिन्यो ।
समारोहको समापनपछि चियापान कार्यक्रम रहेछ र सबै उपस्थितहरुलाई त्यहीँ बस्न आग्रह गरियो । यसो सोचेँ, दिभरी बसेर गफ त सुनियो, अब एक कप चिया पिएर निस्कन्छु भनेर सबैको माझ बसिरहेँ ।
आफ्नै बारीबाट झ्यामझ्याम काटेर ल्याएको हरियो घाँस र धान कुटेर निस्केको ठूटो खुवाएपछि भैंसीले दिने दूध हालेर आफ्नी आमाले पकाएको मिठो दूध चिया पिउने बानी लाको मलाई । त्यो छ्यास्स, पानीमा च्यापत्ति र चिनी हालेर ‘ब्ल्याक टि’ भन्दै दिइएको चियाले मेरो टाउको दुःखाई कम गर्लाजस्तो लागेर त्यहाँबाट उठेर हिँडेँ ।
‘कृषि विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको नेपालमा केही ओहोदा छैन त ? के कृषि अध्ययन गर्न पठाउनु मेरो बा आमाको गरिबीपन हो त ? के कृषि अध्ययन विद्यार्थी बेरोजगारको पाटो हो त ? के नेपाल सरकार कृषि अध्ययन गरेका विद्यार्थीको भविष्यलाई नेपालमा नै सुनिश्चित गर्न सक्दैन त ? के डाक्टर, इन्जिनियर मात्रै पढाई हो त ? के डाक्टर र इन्जिनियरले मात्र देश उँभो लाग्छ त ?’
इस्तै अनेकौं प्रश्न मेरो मनमा चनाका गेडा उम्रेझैं उम्रन थाले बग्रेल्ती ।
अनि म, बाटोको किनाराकिनारै आफ्ना ती उम्रेका प्रश्नका टुसा निमोठ्दै फाल्दै घरतिर लाग्न बाध्य भएँ ।